Igobolondo Lezinto: Isibonisi sedeskithophu yesimanje ngaphezulu kwe-GNOME Shell | Kusuka kuLinux
Igobolondo Lezinto: I-interface yesimanje yedeskithophu ngaphezulu kwe-GNOME Shell
Ukufaka kwe-Linux Post | | Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso, Aplicaciones
Hhayi kuphela Izindawo zeDeskithophu (DE) y Abaphathi bamawindi (WM) "Siphila" (sijabulela) labo abanentshisekelo yokwenza ubuwena nokwenza okuhle I-Graphical User Interfaces (i-GUI) we-Operating Systems evulekile futhi evulekile, njenge I-GNU / Linux. Kusukela, ezikhathini eziningi sinezinketho ezifana izingqikithi (izingqikithi) noma izikhumba (izikhumba) own noma abanye, noma izengezo (ama-plugins) noma izandiso okusivumela ukuthi sishintshe kancane noma ngokushisayo isici esibonakalayo seLinux yethu.
Njengoba kunjalo ngesandiso esibizwa Igobolondo lezinto, iyatholakala ku- I-GNOME Shell, ekwazi ukunikela nge- interface yesimanje yedeskithophu yeLinux.
Igobolondo lezinto intuthuko yakamuva, ngoba, ngokusho kwayo isiza esisemthethweni ku-GitHub ibika ukukhishwa kwayo kokuqala okutholakalayo, ngaphansi kwegama le- Inguqulo ye-1, sangomhla I-10 Ngo-Mashi we-2020, kanye nokukhishwa kwayo kwakamuva okutholakalayo, ngaphansi kwegama le- Inguqulo ye-7, sangomhla Agasti 15, 2020.
Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa kwayo kusekelwe kokunye ukuthuthukiswa okubizwa ngokuthi Izinto ezesabekayo. Ukuba sobabili kudalwe futhi kwagcinwa ngumsebenzisi obiziwe PapyElGringo.
1 Igobolondo Lezinto: Isandiso esihle seGNOME Shell
1.1 Yini i-Material Shell?
1.2 Ngabe i-Material Shell inikezani?
1.2.1 Imodeli entsha yendawo
1.2.2 Isixhumi esibonakalayo esivuselelwe
1.2.3 Injini yokuphatha iwindi efana nokuthayela
1.2.4 Okunye okuvelele
Igobolondo Lezinto: Isandiso esihle seGNOME Shell
Yini i-Material Shell?
Ecaphuna eyakhe Iwebhusayithi esemthethweni ku-inthanethi, ichazwa njenge:
"I-interface yesimanje yedeskithophu ye-Linux, ihlanganiswe njengesandiso se-GNOME Shell. Thuthukisa ulwazi lwakho lomsebenzisi futhi ususe isiphithiphithi sokuhamba komsebenzi kwama-desktops wendabuko. Idizayinelwe ukwenza lula ukuzulazula nokunciphisa isidingo sokukhohlisa amawindi ukuthuthukisa ukukhiqiza. Kuhloselwe ukubikezela ngo-100% futhi kulethe izinzuzo zamathuluzi afunwa ochwepheshe emhlabeni.".
Ngabe i-Material Shell inikezani?
Lapho uhlala ngaphakathi Izinto zeShell ku-GNOME Shell abasebenzisi bangajabulela okulandelayo izici nokusebenza wanezela:
Imodeli entsha yendawo
Ikuvumela ukuthi uzulazule kufayela le- imvelo yokuqhafaza ngokwenza okuningi inobungani futhi iyakwazi ukubikezela. Njengoba, kufaka phakathi indawo yokusebenza elungiselelwe kakhulu ukuqukethe izinhlelo eziningi ngasikhathi sinye bese ushintsha phakathi kwazo kalula.
Lokhu kubonga iqiniso lokuthi ngalinye indawo yokusebenzela ikhonjiswa njengomugqa ngezicelo eziningi. Futhi lapho uhlelo olusha luvulwa, lubekwa ngokuzenzakalela ekugcineni kwendawo yokusebenza yamanje, ngenkathi kufakwa indawo yokusebenza entsha, ifakwa ngokuzenzekelayo ngezansi, iveze konke okwenziwe ngendlela engcono kakhulu.
Lesi sici sikwenza kube lula, kubikezelwe, futhi kusebenze ngokusihlelela ngokuzenzakalela amawindi. okwakhe Imodeli yendawo yegridi unikeza a kwemikhumbi enembile futhi lokho kusiza ukuxhumana nezicelo. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwe- izinqamuleli zekhibhodi kwenza kube lula ngokwedlulele futhi kusheshe ukunyuka uye phansi phakathi kwezindawo zokusebenza, futhi ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla phakathi kwamawindi.
Isixhumi esibonakalayo esivuselelwe
Idizayinelwe ukunikeza ukubuka konke ukuthi konke kukuphi, nokuvumela ukuhlolwa kwefayela le- Imvelo yedeskithophu (DE), zombili ngegundane naku-touch screen. Ngokuphathelene nokwakhiwa kwayo, ihlukaniswe izingxenye ezimbili noma amaphaneli.
El iphaneli yesokunxele ilawula konke okuphathelene nohlelo (izindawo zokusebenzela ezivulekile, isimo sesistimu yamanje, izaziso), kuyilapho i- iphaneli yesokudla ilawula indawo yokusebenza esetshenziswayo (amafasitela kulayini wendawo yokusebenza, iswishi yokuhlela, namawindi uqobo). Kuyo, izingxenye ezimbili ezibalulekile zigqamile, okungukuthi iphaneli yohlelo (kwesobunxele) kanye ne- iphaneli lendawo yokusebenza (phezulu).
Ngokuphathelene nokwakheka kwayo okubonakalayo, ilandela imihlahlandlela ye- Isitayela Sokuthanda Izinto, enikeza isisekelo esiqinile esivumela ukuhlinzeka nge- ubuhle nobuchwepheshe obutholakala kalula. Ngaphezu kwalokho, kufaka phakathi izingqikithi ezintathu ezikhona: Okumnyama, okuKhanya nokuPhezulu. Lesi sakamuva sisivumela ukuthi sisebenzise umbala esizikhethele wona. Ibuye inikeze ithuba lokufiphaza i-interface, kulabo basebenzisi abafuna ukubukeka kwengilazi epholishiwe.
Injini yokuphatha iwindi efana nokuthayela
Ikuvumela ukuthi uhlele amawindi akho ngendlela engabikezelwa ukuthi angagqagqelani, okususa imfuhlumfuhlu yokuphathwa kwewindi. Ngakho-ke, Igobolondo lezinto ivumela izindlela ezahlukahlukene zokubonisa amawindi we umumo ofakiwe. Nakhu okulandelayo:
Kukhulisiwe: Iwindi elilodwa elihlala kuyo yonke indawo yokusebenza.
Hlukanisa: Amafasitela amabili, elinye eduze kwelinye, kuhlala uhhafu wendawo yokusebenzela ngayinye.
Ikholamu: Wonke amawindi akhonjiswa njengamakholomu (awusizo kumqapha obanzi kakhulu)
Phakathi: Iwindi ngakwesobunxele nakwamanye amawindi abekwe ngakwesokudla.
KuGridi: Wonke amawindi akhonjiswa njengegridi.
Igobolondo lezinto linikeza futhi ukuphikelela, okungukuthi, amandla okukhumbula kanye / noma ukwenza ngezifiso izikhundla zokuvula amawindi. Futhi isethi enhle kakhulu ye- izinqamuleli zekhibhodi ukuphatha kalula okudingekayo, ukugwema ukusetshenziswa kwegundane.
Ukuze ufunde kabanzi mayelana Igobolondo lezinto futhi uqonde ngokuphelele ukuthi konke okuchazwe ngenhla kubukeka kanjani, ungavakashela okulandelayo isixhumanisi esisemthethweni en I-GNOME Izandiso, futhi uyibone isebenza ngamavidiyo wakho we-YouTube asemthethweni, ngaphambi kokuzama ukusebenzisa i- inqubo yokufaka.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nokwandiswa okuhle kweGNOME Shell ebizwa «Material Desing», enikeza interface yesimanje yedeskithophu yeLinux; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Igobolondo Lezinto: I-interface yesimanje yedeskithophu ngaphezulu kwe-GNOME Shell
Sawubona, ngiyasithanda lesi sandiso futhi ngiyakuhalalisela umdali waso, kodwa ukuphawula kwami ​​kuya kuleli khasi lebhulogi.desdelinux.net njalo lapho uvakashela leli khasi kungicela ukuthi ngamukele amakhukhi futhi uma sengilamukele, ukukhangisa kweqa iqiniso okukulo cishe konke isikrini somakhalekhukhwini wami esenza ukufunda lo mbhalo sicasule kakhulu, ngiyacela bangane, linganiswa kancane ekukhangiseni, ezikhathini eziningana ngiyekile ukufunda izindatshana enizishicilela ngalesi sizathu kepha manje senginesikhathi Ngiphawula ngale mininingwane, ngiyethemba niyazwisisa, imikhonzo
Isiphathi Sokubonisa: Yiziphi Abaphathi Bokungena ku-Linux?